गर्लफ्रेण्डको २० महिने छोरीलाई ब’लात्कार गरी मा’र्ने एक कोरियनलाई ३० बर्ष जेल – Eps Sathi
December 23, 2021 744
दक्षिण कोरियामा एक ब्यक्तिले आफ्नै गर्लफ्रेण्डको छोरीलाई मा’रेको अ’भियोगमा यहाँको अ’दाल’तले जे’ल स’जाय सुनाएको छ। गर्लफ्रेण्डको २० महिनाकी छोरीलाई मा’रेपछि उनलाई ३० बर्षको जे’ल सजाय तोकिएको हो। बुधबार कोरियाको थेजन शहरको अ’दाल’तले यस्तो स’जाय तोकेको कोरियाली सन्चार माध्यमहरुले जानकारी दिएका छन।
थेजन जिल्ला अ’दाल’तले ति २९ बर्षिय ब्यक्तिलाई यस्तो स’जाय तोकिदिएको हो। याङ थर भएका ति ब्यक्तिले सानो बालक बच्चालाई ब’ला’ त्का’र गर्दै ह’ त्या गरेका थिए। यो घ’ट’ना गत बर्षको जुन महिनामा घ’टेको हो। उनकी गर्लफ्रेण्ड आफ्नो २० महिनाकी छोरी सहित उसँगै अपार्टमा बस्ने गर्दथिन।
सुत्ने क्रममा ति २० महिने बा’लिका लगातार रुपमा रोएपछि ति ब्यक्तिले आफ्नो रि’ष नि’यन्त्रण गर्न नसकेपछि यस्तो हर्कत गरेका थिए। गत बर्षको जुन १५ तारिख राति उनले ति बच्चालाई ब्लाङ्केटले छो’पेर लगातार १ घण्टासम्म मु’ क्का प्र’ हा’र गरेका थिए। राजधानी सउलबाट १ सय ६५ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको थेजन शहरमा रहेको उसको आफ्नै घरमा र’क्सि खाएर ल’ ठ्ठ भएका उनले यस्तो अ’परा’ध गरेका थिए। उनले ति बालिकालाई मा’र्नु अघि ब’ला ‘त्का’र समेत गरेको अनु’ सन्धानबाट खुल्न आएको छ।
२९ बर्षको याङ थर भएका ति ब्यक्ति र जङ थर भएकी उनकी गर्लफ्रेण्ड दुबै मिलेर ति बालिकाको श’बलाई आइस बक्सभित्र प्याक गरेर बाथरुपमा लु’काएका थिए। गत डिसेम्बर १ तारिखमा भएको अ’दाल’तको सुनुवाईमा उनिहरुलाई मृ’त्यु ‘द’ण्डको स’जायको माग गरिएको थियो। तर अ’दाल’तले यस्तो मागलाई वेवास्ता गर्दै उनिहरुको परिचय समेत गोप्य राखेको छ।
अ’दाल’तले ति ब्यक्तिको कु’का’र्यालाई शब्दले बर्णन गर्न समेत नसकिने खालको भएको बताएको छ साथै समाजमा यस किसिमका थुप्रै घ’ट’नाहरु भइरहेको हुन सक्ने आ’श’ङ्का गरेको छ। साथै अ’दाल’तले उक्त ब्यक्तिले आफूले गरेको ग’ल्तिको ठूलो प’श्चताप गरेको र अब सुध्रने बाचा गरेका कारण पनि का’बा’हिमा केहि लचकता अपनाइएको बताएको छ। उनकी गलफ्रेण्डलाई भने १ बर्ष ६ महिना जेल स’जाय तोकिएको छ।
Prevआज १ सय ३८ जना इपिएस कामदार दक्षिण कोरियातर्फ उढ्दै, हेरौं अर्को उडान कहिले?
Nextअसाध्यै बोल्ड रुपमा प्रस्तुत हुने भेटेनरी डक्टर टिकटकमा भाइरल, को हुन त उनि? भिडियोसहित
इन्छनले फो’होर लिन नमा’नेपछि ख्यङ्गीदो र सउल त’नाबमा, अब कहाँ फाल्ने?